Vaovao - Izahay no safidinao tsara indrindra hividianana fitaovana mamiratra any Shina
Izahay no safidy tsara indrindra hividianana fitaovana luminescent any Shina
1. Mifantoka amin'ny fitaovana mamirapiratra ihany izahay.Manana traikefa matihanina mihoatra ny 15 taona izahay amin'ny fitaovana mamirapiratra.Manana fahaiza-manao amin'ny fitaovana mamirapiratra izahay.Ny tanjantsika koa dia fitaovana mamirapiratra.
2, Ho an'ny fivarotana fitaovana luminescent, matihanina kokoa izahay.Matihanina izahay satria feno fanoloran-tena.Izahay dia mandinika ny famirapiratan'ny vokatra, ny fahamarinan'ny vokatra.Miorina amin'ny fiantohana ny famirapiratana mamirapiratra sy ny fotoana mamirapiratra, dia mandinika bebe kokoa ny toetra fototry ny vokatra isika.Ohatra, ny sarimihetsika mamirapiratra, tsy vitan'ny hoe manana famirapiratana mazava tsara isika, raha oharina amin'ny sarimihetsika dokam-barotra nentim-paharazana, dia manana ny toetran'ny sarimihetsika dokam-barotra nentim-paharazana ihany koa izy io: mora atao pirinty, mora atao pirinty, matanjaka manohitra ny fahanterana sy ny sisa.
3, mora kokoa isika.Manana fanapahan-kevitra haingana sy famonoana mahery vaika izahay.
4. Mahery ny fahaiza-manao fanaterana baiko.Aterinay aminao foana ny entanao miaraka amin'ny kalitao sy ny habetsahana farafahakeliny aorian'ny fandraisana ny baiko.
5. Fitantanana ny foto-kevitra momba ny fitantanana mba hiarovana ny tombontsoan'ny mpanjifa: ny kalitaon'ny vokatra aloha, mba hiantohana ny fahamarinan-toerana sy ny kalitao ho fototry ny vokatra.Ny fahamarinan-toeran'ny vokatra no loharanon'ny tombontsoa rehetra.Mifantoka hatrany amin'ny tombontsoan'ny mpanjifa.Miantoka ny tombontsoa fototry ny mpanjifa ary manatsara ny tombom-barotra amin'ny vokatra.PDCA cyclic order mode.
5. Filozofia fitantanana mba hiarovana ny tombontsoan'ny mpanjifa: ny kalitaon'ny vokatra aloha, mba hiantohana ny fahamarinan-toerana sy ny kalitao ho fototry ny vokatra.Ny fahamarinan-toeran'ny vokatra no loharanon'ny tombontsoa rehetra.Mifantoka hatrany amin'ny tombontsoan'ny mpanjifa.Miantoka ny tombontsoa fototry ny mpanjifa ary manatsara ny tombom-barotra amin'ny vokatra.Ny PDCA dia afaka manodina ny fomba fibaikoana.
6, Ny tanjaky ny orinasa dia antoka ny tombontsoan'ny mpanjifa rehetra.